MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA CUNNADA COCKER SPANIEL DOG EE MAREYKANKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada Cunnada Cocker Spaniel Dog ee Mareykanka
'Tani waa Charlie. Isagu waa 4 sawirka ku dhashay July 27 2014 Fenton ṣubu, Ontario wuxuuna si farxad leh ula nool yahay qoyskiisa Toronto Ontario. Charlie wuxuu jecel yahay inuu soo qaado oo uu la ciyaaro walaalkiis dhalaanka ilmaha dhashay. Aad buu u macaan yahay oo jacayl baa ka buuxa. '
weyn pyrenees xadka collie isku darka dhala
Liiska Cocker Spaniel Mix Eeyaha Taranka
Cocker Spaniel waa eey dhexdhexaad ah oo adag. Madaxa ayaa lagu soo koobay joogsi la yiraahdo. Afku waa ballaadhan yahay oo qoto dheer yahay oo leh laba jibbaaran, xitaa daamanka. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Kubadaha indhaha waa mugdi, aad u wareegsan oo leh meedh yar oo yicib u eg. Merle Cocker Spaniels wuu yeelan karaa indho buluug ah . Dhegaha dhaadheer ee dhaadheer ayaa si fiican baalal u leh. Meelaha kore ee kore ayaa waxoogaa ka billowda hore eeyga illaa gadaal lugahana waa toosan yihiin. Dabada ayaa ku xidhan. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Waxaa laga yaabaa in la soo saaro qoyaan-biyoodka Koodhka xariirta ahi waa mid fidsan ama wax yar ka rogrogmaya. Timaha waa dherer dhexdhexaad ah oo jirka ku yaal laakiin gaaban oo ganaaxa madaxa. Waxaa jira baalal dhagaha, laabta, caloosha iyo lugaha. Koodhku wuxuu ku yimaadaa midab kasta oo adag, madow oo leh dhibco midab leh, meeris, midab adag oo leh dhibco midab leh iyo midab midab leh. Tusaalooyinka isku-dhafka midabka parti waa cadaan leh buunbuunin ama casaan, caddaan madow, ama cadaan leh dhibco madow iyo tan. Khadadka goobta ayaa leh jaakado ka gaagaaban khadadka bandhigga.
Geesinimada iyo xiisaha shaqo, American Cocker Spaniel wuxuu si isku mid ah ugu habboon yahay nolosha sida gundog ama xayawaan gurijoog ah. Farxad, dabacsanaan iyo macaan, noocani waa mid sirdoon celcelis ah waana mid ixtiraamaya awooda sayidkiisa. Madadaalo, aaminaad iyo soo jiidasho leh dabada weligeed gilgishay, waa firfircoon tahay, ciyaar badan tahay, laakiin waa inay noqotaa si fiican u dhexgalay marka ay yar tahay in laga fogaado u janjeera xishoodka. Cockers-ka fahamsan booskooda inuu ka hooseeyo aadanaha ayaa ku wanaagsan carruurta. Waxay jecel yihiin qof walba waxayna u baahan yihiin hogaan adag, kalgacal jecel iyo jimicsi maalinle ah si ay u farxaan. Waxay noqon karaan adag tahay in guriga la dumiyo . Waxay u badan yihiin tababar fudud si fiicanna ula noolaadaan xayawaanka kale. Ha u ogolaan eeygan inuu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeygu aaminsan yahay inuu hogaamiye u yahay aadanaha oo dhan. Tani waxay sababi kartaa heerar dabeecadeed oo kala duwan waana meesha milkiileyaal badani khaldamaan. Hadafka leh eeyaha oo dhan waa in gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dabiici dabiici ah eeyga inuu yeesho ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal khadadka hoggaamiyeyaasha si cad ayaa loo qeexay, xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Milkiileyaasha u oggolaada eeyahooda inay aaminaan inay ka sarreeyaan nidaamka iyo / ama aan bixin jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah la kulmi doonaa dabeecad ka duwan tan aan kor ku soo sheegnay. Eyga ayaa laga yaabaa inuu yeesho xishood-fiiqitaan, taas oo ah isku-dar cabsi iyo xukun oo sababi kara xumaan. Kaadi kaadi badiyaa waxaa sababa xamaasad xad dhaaf ah, jimicsi la’aan maalinle ah oo maskaxeed iyo jimicsi, halkaasoo ay ku dhaawacmaan maskaxdoodana aan la siin fursad ay ku xasilaan maalin kasta. Sidoo kale dagaal badan ilaalinta walxaha , dadka iyo meelaha, qeylinta waswaaska ah, firfircoonaan iyo meeraysiga, iyo kuwo kale dabeecadaha xun . Waxaa jira laba nooc, khadadka xariiqda iyo khadadka bandhigga. Khadadka aagagga waxaa loogu talagalay inay shaqeeyaan oo waxay leeyihiin dareen ugaarsi fiican iyo jubbado gaagaaban, taas oo waxtar badan u leh ka shaqaynta kaynta. Labada noocba waxay samaystaan ​​xayawaan wanaagsan marka milkiilayaashu daboolaan baahidooda sida xayawaanka xayawaanka.
Dhererka: Ragga 15 ½ inji (38 cm) Dumarka 14 ½ inji (36.8 cm)
Miisaanka: 15 - 30 rodol (7 - 14 kg)
Qaar ka mid ah walwalka ugu waaweyn ee ka jira Isbaanishka 'Cocker Spaniels' waa indho-beelka indhaha, glaucoma iyo raaxada patellar Qaar ka mid ah walaacyada yar yar waa miskaha dysplasia, ectropion, entropion, PRA, xasaasiyad, isha cherry , seborrhea, dibnaha laab laab pyoderma, otitis externa, cudurka beerka, urolithiasis, soo bixitaanka qanjidhada nictitans, CHF, yaraanshaha fosforfokinoksease iyo wadnaha. Mararka qaarkood waxaa la arkaa torsion gastric iyo xusulka dysplasia. Sidoo kale IMHA (Dhiig-baxa Dhiig-baxa Hemolytic). Sida laga soo xigtay milkiileyaal yar:
macluumaadka adhi-yaraha Australia
Cocker-keenayagu weligeed maalin xanuunsan nolosheeda illaa ay si lama filaan ah u noqotay caajis iyo kaadi kaadi. Lix maalmood ka dib iyo $ 3000 oo ah biilasha xoolaha, way dhimatay. Waan ogahay inaadan qori karin cudur kasta sababo la xiriira xadeynta meelaha, laakiin khabiirka daawada gudaha ee daaweeyay eeygayaga ayaa sheegay in IMHA ay ku badan tahay dadka Cockers-ka, oo had iyo jeerna ay dilaan. Waa dilaa dhaqso badan, aamusnaan ah. '
Waxaa soo tabiyay milkiilaha Cocker Spaniel - 'Eygeyga Maqaarka ah ee reer Spain ee Spaniel wuxuu dhintay 9/26/2011 ee IMHA. Waxaa lasiiyay talaal 9/20 waxayna muujisay calaamadihii ugu horeeyay ee dhibaato 9/22. Waxay ahayd 6 1/2 sano jir caafimaadkeedu wanaagsan yahay. Fadlan sii gudbi in milkiileyaasha American Cockers ay u baahan yihiin inay si aad ah uga feejignaadaan cudurkan iyo suurtagalnimada eeyahooda ay ku dhacaan. Waa inay had iyo jeer sameeyaan baaritaanka dhiigga kahor tallaalka iyo calaamado kasta oo dhibaato ah ka dib waa inay isla markiiba daaweeyaan dhakhtarka xoolaha. Waxba kamaanaan ogeyn cudurka oo waligeen naguguma talinin dhakhtarka xoolaha ee suurtagalnimada noocyadan. Waxaan barnay tan iyo inay tahay wax caadi ah oo loo baahan yahay in laga raadsado eeygan da'da ah. Vets waa inay hubiyaan inay milkiilayaashu ka warqabaan iyo xiriirka suurtagalka ah ee tallaallada. Kaliya waxaan rabaa inaan ka caawiyo sidii hadalka loo heli lahaa.
Eeygaygu sidoo kale wuxuu u dhintay cudurkan (IMHA). Wuxuu ahaa 7 1/2 sano jir. Ma uusan muujin wax calaamado ah inuu jiran yahay ilaa laba maalmood kahor intuusan dhiman. Cudurka si dhakhso leh ayuu u shaqeeyaa. Calaamadda ugu horreysa ee aad jiran tahay xayawaanku wuxuu u baahan yahay in la geeyo dhakhtarka xoolaha waxaana laga yaabaa inuu u baahan yahay dhiig lagu shubo. Dhakhtarkayaga caafimaadka ayaa go'aansaday inaan sugno oo aan aragno subaxa hore, markaa goor dambe ayay ahayd. Cudurkani had iyo jeer kama soo baxo tallaalada eeygaygu kuma dhicin tallaalka laba bilood oo kale. ”
1 sano jir ah pyrenees weyn
Cockers waxay ku fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si fiican loo jimicsado. Waxay si firfircoon uga shaqeeyaan gudaha. Daarad yar ayaa ku filan. Kuma habboona inaad keligaa ku noolaato aqal.
Cockers-ka Mareykanka waxay leeyihiin adkeysi fara badan waxayna u baahan yihiin jimicsi joogto ah. Waa in la qaataa maalin kasta, socod dheer . Markaad socotid, iska ilaali jiqda caday ee jajabi kara jaakadda. Hubso inaad haysatid eeyga oo garab iyo gadaal ka jooga qofka hogaaminaya, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha uu ku hogaaminayo wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha, eeyga maahan.
1 - 7 eeyo yaryar, celcelis ahaan 5
corgi jack russell mix eey
Masax indhaha hoostooda had iyo jeer sida ay u jeexjeexaan. Milkiilayaasha qaar waxay doorbidaan inay ka baxaan jaakad dheer, maalin kasta cadayasho iyo shaambo si joogto ah iyadoo saddexdii biloodba mar la maqlo iyo la jaro. Kuwa kale waxay doorbidaan inay jaakada ka dhigaan dherer dhexdhexaad ah si ay u noqdaan kuwo shaqeynaya. Si kastaba ha noqotee, eeygu wuxuu u baahan doonaa goyn joogto ah. Markaad cadayanaysid, taxaddar inaadan soo bixin timaha xiiran. Noocani waa celcelis daadiya.
Cocker Spaniel wuxuu soo jiray ilaa qarnigii 14aad. Noocani wuxuu ka soo jeeda Ingiriisi Cocker Spaniels kuwaasoo la keenay Mareykanka. Isbaanishyada ayaa lagu soocay cabir ahaan waxaana loo bixiyay magaca American Cocker Spaniels, oo si rasmi ah loogu yaqaan 'Cocker Spaniel' oo ay leedahay AKC. American Cocker Spaniel ayaa ka caansan kan asalka ah ee Ingiriisiga ah 'Cocker Spaniel', oo waxoogaa muuqaal ahaan ku kala duwan, isla markaana wata muusooyin dhaadheer iyo jidh waaweyn. Cocker Spaniel waa eey ugaarsi ugaarsi ku shaqeeya oo awood u leh inuu ka shaqeeyo dhul adag dhul qoyan iyo mid qalalan labadaba. Aad ugu fiican futada iyo soocelinta ciyaarta oo leh afka jilicsan. Waxay si fiican u dhageystaan ​​amarrada. Magaca 'Cocker' wuxuu ka yimid qoryaha, shimbir ugaar ah eeyaha ayaa caan ku ahaa dhaqidda. Qaar ka mid ah hibooyinka American Cocker Spaniel waa ugaarsi, daba gal, dib u soo ceshan, ilaalin, firfircoonaan iyo u hogaansanaan tartan. The American Cocker Spaniel waxaa markii ugu horeysay aqoonsaday AKC sanadkii 1873.
CiCi the American Cocker Spaniel oo 13 jir ah
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Cocker Spaniel Mareykan ah
Sawirada Cocker Spaniel ee Mareykanka 1
Sawirada Cocker Spaniel American 2
Sawirada Cocker Spaniel ee Mareykanka 3
Sawirada Cocker Spaniel American 4
Noocyada Cocker Spaniel Dog
Eyga Cocker Spaniel ee Mareykan ah: Sawirro guryo la ururin karo
bulldog Maraykan dabeecad isku darka shaybaarka
Pyrenees weyn qasan st Bernard
eyda eey in uu si fiican ula kasta oo kale oo
4 bilood oo buluug sanka bulxan ah
aan eeyaha sanka jeestay pink
eey murug ka yar 50 lbs